गर्भावस्थामा किन हुन्छ मधुमेहको खतरा उच्च ? यसरी गर्नुहोस् नियन्त्रण !! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्भावस्थामा किन हुन्छ मधुमेहको खतरा उच्च ? यसरी गर्नुहोस् नियन्त्रण !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ ११, २०७८ 0
गर्भावस्थामा महिलालाई मधुमेह (डाइबिटिज) हुन्छ, जसलाई गर्भकालीन मधुमेह भनिन्छ। यो आमा र बच्चा दुवैका लागि घातक हुने गर्छ। पछिल्लो समयमा यो विश्वकै चुनौती बन्दै गइरहेको छ।
नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनअनुसार कुल गर्भवतीमध्ये करिब १० देखि ३५ प्रतिशतमा गर्भकालीन मधुमेहको समस्या हुने गरेको पाइन्छ।
गर्भकालीन डाइबिटिज तीन किसिमका हुने गर्छन्। पहिलो हो, प्रिकन्सेप्सन डाइबिटिज। यो गर्भवती हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै मधुमेह हुनु हो। यदि डाइबिटिजको समस्या भएका कुनै महिला गर्भवती भएमा यो समस्या हुने गर्छ। यो जटिल खालको हुन्छ।
गर्भकालीन डाइबिटिज दोस्रो मुख्य समस्या हो । यो गर्भवती भएको समयमा हुने गर्छ। यो अधिकांशमा हुने डाइबिटिज पनि हो।जब गर्भावस्थादेखि नै भएको डाइबिटिज अत्यधिक मात्रामा देखिन्छ, त्यसलाई तेस्रो किसिमको गर्भकालीन डाइबिटिज भनिन्छ।
शरीरमा इन्सुलिनले पर्याप्त रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा गर्भकालीन डाइबिटिजको समस्या हुने गर्छ । बच्चाको विकासका लागि शरीरमा हार्मोन परिवर्तन वा बढी सक्रिय हुने हुन्छन् । जस्तै, एचपिएल, ग्रोथजस्ता हर्मोनले शरीरमा इन्सुलिनलाई निष्क्रिय बनाउने गर्छन्।
डाइबिटिजको अर्को मुख्य कारण अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली हो । गर्भावस्थामा यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा डाइबिटिजको समस्या झन् बढेर जाने गर्छ।
आमाबुबामा डाइबिटिज भएमा पनि गर्भावस्थामा जोखिम बढी हुन्छ। ओभरीमा सिस्टको समस्या हुँदासमेत गर्भकालीन डाइबिटिज हुन्छ । त्यस्तै, अत्यधिक मोटोपना पनि इन्सुलिन निष्क्रय पार्ने अर्को कारण हो।
गर्भावस्थामा मधुमेहको एउटा कारण अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली हो। गर्भावस्थामा यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा मधुमेहको समस्या झन् बढेर जान्छ।
गर्भकालीन डाइबिटिजका कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ । यदि कुनै महिलामा पहिलेदेखि नै डाइबिटिजको समस्या भएमा मुख सुक्ने, तौल घट्ने, थकान महसुस हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्।
आमाबाबु डाइबिटिज भएका, अत्यधिक मोटोपना र ओभरीमा सिस्टको समस्या देखिएका महिलामा सुगरको जाँच गरिन्छ। गर्भावस्थाको २४ देखि २८ हप्तामा हर्मोनको मात्रा बढी हुने भएकाले यो जाँच गरिएको हो।
खाली पेटमा सुगरको मात्रा ८१ एमडीभन्दा बढी हुनु र ७५ ग्राम ग्लुकोज खाएको एक घन्टामा १८० एमडी वा दुई घन्टामा १५० एमडीभन्दा बढी सुगरको मात्रा भएमा गर्भकालीन डाइबिटिज भएको मानिन्छ।
महिलामा डाइबिटिजको समस्या भएमा पहिलेदेखि नै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । तौल नियन्त्रण गर्ने, औषधि सेवन गरिरहेको खण्डमा औषधि परिवर्तन गर्ने वा घटाउने र खानपानमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ।
गर्भावस्थामा डाइबिटिजको समस्याबाट जोगाउन इन्सुलिन नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि औषधि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर, गर्भावस्थामा औषधिको प्रयोग खासै गरिँदैन।
डाइबिटिजको समस्या बढी नै भएमा चिकित्सकको निगरानीमा रहेर हेरचाह गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा बच्चामा समस्या हुने भएकाले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
यो समस्या करिब पाँच वर्षमा फेरि दोहोरिन सक्ने भएकाले खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ खानपान र हलुका एक्सरसाइज गरेमा धेरै हदसम्म डाइबिटिजको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।
गर्भावस्थामा डाइबिटिज भएमा पेटमा रहेको बच्चाको विकास राम्ररी नहुने, समयभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मिने, सामान्यभन्दा बढी वा कम तौल हुने, अपांगता भएको जन्मिने, बच्चाको मिर्गौला र ढाडमा समस्या हुने र पानी जम्नेजस्ता समस्या हुने गर्छन्।
आमाको अत्यधिक मात्रामा पेट फुल्ने, रक्तचाप र तौल बढ्ने, आँखामा रेटिनामा समस्या देखिने हुन्छ। बच्चाको तौल बढी हुँदा सुत्केरीको समयमा बढी रक्तश्राव हुने, शल्यक्रियाबाट डेलिभरी गर्नुपर्ने तथा पाठेघरको मुखमा घाउ आउने हुन्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार